December 2019 – siifsiin
Mirga namota idil- Addunyaa/ united Nations/ irraa kanfudhatamee KEEWWATA 15
Keewwata – 15 Namni kamiyyuu mirga lammummaa argachuudhaa ni qaba. Namni kamiyyuu mirgi lammummaa isaa garmalee hin mulqamu; akkasumas mirga lamummaa isaa geeddaruus hin dhorkamu.
AMALOOTA NAMOOTA MO’ATOO
Abdii hin kutatan: Yoo kufaan ka’uu akka danda’an beeku.Waan gaarii fi cimina ofii isaannii kan irraa nama biraa arguu danda’u: Hir’ina isaani irratti osoo hintaane waan qabna irratti xiyyeeffatu.Hiriyoota gaarii ta’an nannoo isaanitti qabatu:Wa’ee dogoggora darbeef deddebi’anii yaadanii of-hin dhiphisan, garuu irraa baratu.Kufaati isaani dhoksuuf hin dhama’man, akka baruumsa argataniitti yaadu.Murtoo murteessuf ofdubaa hin garagalanYeroo … Continue reading AMALOOTA NAMOOTA MO’ATOO
Guyyaa tokko gondan sadii karaa deeman turan. Isaan waliin hasa’aa turan. Osoo dinni tokko nutti dhufee akkami mo’aana jedhanii yaada turan. Daqiiqa muraasa booda arba tokko argan. Gondaa kunnen yaada isaani irratti kennu jalqaban. Gondaan tokkoffaan akkas jedhe, Arba kana haa ajjeefnuu, nuti salphaatti ajjjesuu dandeenya jedhe. Gondaa inni lammaffaan immoo, millaa arba kanaa yaa … Continue reading Tapha
KEEWWATA – 14 Namoonni hundi, manneen murtiifi qaamolee seeraa fuulduratti walqixa ilaalamu. Namni kamiyyuu, himati yakkaa ykn civiilii yeroo isarratti murtaa’u, qaama abbaa seerummaa seeraan hundeeffame, aangoo kan qabuufi bilisa ta’e bira dhiyaatee murtii seeraa loogii hinqabneefi ifa ta’e argachuuf mirga qaba. Hawaasa demokraatawaaf barbaachisoo kan ta’an naamusa gaarii, nageenya ummataa, ykn tasgabbii biyyaalessaa eeguuf … Continue reading Mirga namota idil- Addunyaa/ united Nations/ irraa kanfudhatamee KEEWWATA 14